PB Vita - L - Progress Biochem Co.,Ltd
+951 822 8770 [email protected]
PB Vita - L
Home » Products » PB Vita – L
Multivitamin & Minerals with Lysine
Essential nutritional formula for growing children.
Pack size – 60 ml, 100 ml
Each 5ml syrup provides:
PB Vita – L is an ideal preparation especially formulated for growing children.
It is indicated for various vitamin-mineral requirement of body.
L-Lysine is an appetite stimulant and provides proper body growth.
Multivitamins & minerals are extremely beneficial for children in their growing years because it encourages:
Building & maintaining strong bones
Improving nerves function & immune response
Up to4years : 1/2 teaspoonful (2.5 ml) once daily
4 years & above: 1 teaspoonful (5 ml) once daily
ထုတ်ပိုးပုံ – ၆၀ မီလီလီတာ၊ ၁၀၀ မီလီလီတာ
PB Vita-L ကလေးအားဆေးရည်တွင် ကလေးငယ်များအစာစားချင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ L-Lysine အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ essential vitamins (၉)မျိုးနှင့် သက်စောင့်ဓာတ်များဖြစ်သည့် minerals (၃)မျိုးပါဝင်ပါသည်။
ကလေးငယ်များ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရများကို ဖြည့်တင်းပေးမည့် Essential Nutritional Formula
ကလေးများအစာ စားချင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးရုံသာမက ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အထောက်အကူပေးမည့် L-Lysine
ကလေးငယ်များ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သန်စွမ်းကျန်းမာစေမည့် vitamin B complex
အမြင်အာရုံကို ကြည်လင်စေမည့် Vitamin A၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေသည့် Vitamin C၊ အရိုးနှင့်သွားများကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေမည့် Vitamin D၊ ကလေးငယ်များကို ဖွံ့ဖြိုးကျန်းမာစေမည့် Vitamin E တို့အပြင် အရိုးသန်မာ၊ ဉာဏ်ရည်တက်စေပြီး၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအား မြင့်မားစေသည့် Calcium, Magnesium, Zinc တို့ကို အချိုးကျစွာ ပေါင်းစပ်ထားသဖြင့်
(၄)နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအတွက် ဇွန်းတစ်ဝက် (2.5)ml တစ်နေ့(၁)ကြိမ်
(၄)နှစ်အထက် ကလေးငယ်များအတွက် တစ်ဇွန်း (5 ml) တစ်နေ့(၁)ကြိမ် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Multivitamin & Lysine
PB Vita - C
PB Vita Oral Drop
145 (B), 146 (A), Pa Tin Wun U Shwe Bin Street, Industrial Zone (1), Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
MAC Tower II, No. 797, Room No.B-002, Corner of Bogyoke Aung San Road and Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon.
+951 822 8770,+951 822 7645,+951 822 7124,+951 821 1282,+959 454 192 866,+959 454 192 877
Progress Biochem started in 1992 as an importer and distributor of pharmaceutical products. Today, we areapharmaceutical manufacturer incorporated in Myanmar and obtained our license from FDA (Myanmar) in April 2016.
Copyright 2020 Progress Biochem. All rights reserved.